Nepal Dayari | फेरी घट्यो कैलालीको लम्कीमा यस्तो घटना, स्थानीयद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध !
फेरी घट्यो कैलालीको लम्कीमा यस्तो घटना, स्थानीयद्वारा राजमार्ग अवरुद्ध !
मंग्सिर ९, २०७८ बिहिबार ४८४ पटक हेरिएको
कैलालीको लम्कीमा ना२ख ९३७० नम्बरको ट्रकले ठ’क्क’र दिएर एक महिलाको मृ,त्यु भएपछि आ’क्रो’सित बनेका स्थानीयले ट्रकमा आ’ग’ज’नी गरेका छन् । उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि अवरुद्ध गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक विश्वराज अधिकारीका अनुसार स्थानीयको भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक दर्जनबढी अश्रुग्यास प्रहार गरेकाे छ । तर, पनि स्थिति शान्त बन्न सकेको छैन । अहिले सो स्थानमा सुरक्षाहरू परिचालन गरिएको छ । घ,टनापछि प्रहरीले ट्रक चालक नवलपासीका राजकुमार चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएकाे प्रहरी प्रमुख अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, दुई सय रुपैयाँमा मानिसको ढुवानी गरिन्छ’ यो सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराको दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि भने दुई सय रुपैयाँमा भरियामार्फत विगतदेखि नै ढुवानी हँुदै आएको छ ।